ကလေးမျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မိခင်တို့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ – Healthy Life Journal
ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
မေး. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုတစ်ခုခုကြောင့် သန္ဓေသားမှာ မျက်စိထိခိုက်တတ်ပါသလား ဆရာ။
ဖြေ. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးသုံးရတယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့ မျက်စိကိုထိခိုက်ဖို့ ရာနှုန်းပြည့်သေချာပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်သင့်တယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့ မျက်စိကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သောက်မိတဲ့ တချို့ဆေးတွေက သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
မေး. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အနေနဲ့ မွေးလာတဲ့ ရင်သွေးမှာ မျက်စိပြဿနာမရအောင် ဘယ်လိုသတိထားသင့်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ. မိခင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့ လိုအပ်ရင် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုကတော့ မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရမှာပဲ။ မိခင်ရဲ့အသက်က ပိုအရေးကြီးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုမဟုတ်တဲ့ အခြေအနေဆိုရင် ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမသွားရဘူး။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ဟာ အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝအောင် စားရမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ တချို့ရောဂါပိုးတွေ (ဥပမာ Rubella ရောဂါပိုး၊ ဝက်သက်ရောဂါပိုး)တွေ မဝင်အောင် ဂရုစိုက်နေထိုင်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီရောဂါပိုးတွေဝင်ခဲ့ရင်လည်း ရောဂါပိုးမပြန့်အောင် ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာပဲ နီးစပ်ရာဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသပြီး ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
ကလေးမွေးစဉ် မွေးလမ်းကြောင်း မသန့်တဲ့အတွက် ကလေးရဲ့မျက်စိမှာ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မွေးတဲ့အချိန်မှာ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းဟာ သိပ်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အတွက် မျက်ရည်လမ်းကြောင်းပိတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အသက်သုံးနှစ်လောက်မှာ သူ့အလိုလိုပြန်ပွင့်သွားနိုင်ပါတယ်။
မေး. ကလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာ မသန့်ရှင်းတာကြောင့် မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီး မွေးရာပါ ဘယ်လိုရောဂါတွေ ရနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။
ဖြေ. ကလေးမွေးစဉ် မွေးလမ်းကြောင်း မသန့်တဲ့အတွက် ကလေးရဲ့မျက်စိမှာ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မွေးတဲ့အချိန်မှာ နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းဟာ သိပ်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အတွက် မျက်ရည်လမ်းကြောင်းပိတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အသက်သုံးနှစ်လောက်မှာ သူ့အလိုလို ပြန်ပွင့်သွားနိုင်ပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ ဒီထက်ဆိုးနိုင်တာက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မေး. မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီး မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကော ရှိပါသလား ဆရာ။
ဖြေ. မျိုးရိုးလိုက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကပြေးတာကတော့ ရေတိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကင်ဆာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတချို့ကလည်း မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ မိဘမှာဖြစ်လို့ သားသမီးမှာမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်လို့မရဘူး။ မျိုးရိုးဗီဇ (Gene)မှာကိုက ပါလာတာကိုး။
မေး. မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိဘတွေက သားသမီးကိုပေးသင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုက ဘာပါလဲဆရာ။
ဖြေ. ကလေးတွေရဲ့မျက်စိကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပေးရပါမယ်။ အတွင်းတိမ်ရောဂါနဲ့ ရေတိမ်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်လို့မရပေမယ့် ကူးစက်ပိုးဝင်တာတွေကို ကာကွယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ မျက်လုံးကို သန့် ရှင်းအောင်ထားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဖုန်မှုန့်၊ သဲမှုန့်တွေ မျက်စိထဲဝင်တဲ့အခါ ရေကောင်းရေသန့်နဲ့ မျက်စိကို အားရပါးရဆေးကြောပေးလိုက်ရင် အများကြီးသန့်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေ စာကျက်တဲ့အခါ၊ တီဗီကြည့်တဲ့အခါ၊ ကွန်ပျူတာကြည့်တဲ့အခါ နာရီဝက်သုံးပြီးတိုင်း တစ်မိနစ်ခန့်မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီး အနားယူပေးတဲ့အကျင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် မျက်စိကျန်းမာရေး တော်တော်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။
Related Items:child, Eye, Eye Care, Featured2, Preganancy